IELTS (Academic) – BSI Learning Academy
Home IELTS IELTS (Academic)
Admin April 30, 2020 May 25, 2020 IELTS
8:00 am to 10:00 am on Saturdays and Sundays
Monthly Fees: 100,000 kyats
The course runs all year round. You may start joining any weekend that suits you fine.
IELTS preparation (Academic 4.5-6.0)
3:00 pm to 5:00 pm on Saturdays and Sundays
Entry level: B1 (CEFR)/ 5.0 (IELTS)
New course starts on 6th June 2020.
IELTS preparation (Academic 6.0-7.5)
5:00 pm to 8:00 pm on Saturdays & Sundays
Entry level: B2 (CEFR)/ 6.0 (IELTS)
Fees for 60 hours: 490,000 kyats
Self-study/ Homework: 40 hours
Total hours of learning and practising- 100 hours
Facilitation & Interaction – Facebook Group & Zoom
ဖော်ပြပါ IELTS online အတန်းများကို နယူးဇီလန်နိုင်ငံ အိုးတဂိုတက္ကသိုလ်မှာ ပါရဂူဘွဲ့ စာတမ်းရေးသားပြုစုနေသူ၊ သုတေသီလုပ်ခဲ့စဉ်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ အောက်စ်ဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်တွင်ပြုလုပ်သော နိုင်ငံတကာသုတေသီများ စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဝင်ရောက်ပါဝင် တင်ပြဖို့ ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသူ၊ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တက်စဉ် တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် ဒုတိယဆု ဆွတ်ခူးခဲ့သူ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကား သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ (၁၄) နှစ်ကျော်ရှိသူ ဆရာမ ဒေါ်လှဝင်းမေဦး ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
When you make the payment for the registration, please mention your full name and the class you are enrolling for. Then the screen shot should be sent to bsieducation.myanmar@gmail.com or BSI Facebook Messenger.
We have proven records of success in coaching for the IELTS over 14 years.
Individual Coaching for IELTS
Trainer/ Lecturer: Ms Hla Win May Oo
Best IELTS Class, BSI IELTS class, IELTS, IELTS four skills, IELTS intensive, IELTS with Teacher Wendy, Quality IELTS lessons. Bookmark.